सिन्धुपाल्चोकमा यी नेता माधव नेपालकै पार्टीमा रहने भए ? – मिलिजुली खबर
सिन्धुपाल्चोकमा यी नेता माधव नेपालकै पार्टीमा रहने भए ?
सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा माधव नेपालका विश्वासिला ब्यक्तिहरू सबै एमालेमै रहने भएका छन् । आज कोटेश्वरमा तत्कालीन एमालेको माधव नेपाल गुटका बाँकी नेता कार्यकर्ताले कार्यक्रम गरेपछि को एमालेमा र को नेकपा (एकिकृत समाजवादी) पार्टीमा रहने निर्क्योल भएको हो ।
यसअघि माधव नेपाल समूहकै सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका फ्रन्टलाईनर नेताहरूको बैकठले एमालेमै रहने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको विपक्षमा रहेका समूहले आज कोटेश्वरमा छुट्टै भेला गरेको थियो ।
आजको भेलामा जनप्रतिनिधिका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य सिंह बहादुर विश्वकर्मा र मेलम्ची नगरपालिकाका उपप्रमुख भगवती नेपाल मात्रै सहभागी हुनुभएको थियो । नेपाल अघिल्लो भेलामा पनि सहभागी हुनुभएको थियो । र एमालेमै रहने निर्णय गर्नुभएको थियो ।
तर अघिल्लो पटकको भेला सकिए लगत्तै उपप्रमुख नेपालले नेकपा (एकिकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसंग भेट गरेका थिए । उक्त भेटपछि उनीहरू पुनः नेकपा (एकिकृत समाजवादी) पार्टीमै फर्किएकी हुन् ।
त्यस्तै चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा एमालेबाट मेयरको उम्मेदवार रहेका सोम सापकोटा पनि समाजवादीमै खुलेका छन् । अन्य प्रभावशाली नेता र जनप्रतिनिधि भने सबै एमालेमै रहने निश्चित जस्तै छ । तर भदौ २२ गते साँझ ५ बजेसम्म दल रोज्न पाउने भएकाले अझै को को एमालेमा रहन्छन् भन्ने अन्तिम टुंगो भने लागिसकेको छैन् ।
तर अमृत कुरार बोहारा, शेर बहादुर तामाङ, झम्क नेपाल, सुभाष कर्माचार्य, सूर्य लामा, निमफुञ्जो शेर्पा, केदार क्षेत्री, टासी लामा ह्योल्मो लगायतका बहुसंख्यक माधव नेपाल समूहका नेता र जनप्रतिनिधि एमालेमै रहने लगभग निश्चित छ ।
काभ्रेका दुबै प्रदेश सांसदले एमाले त्यागे
काभ्रेमा निषेधाज्ञा भदौ २५ गतेसम्म थपियो